Sida Loo Isticmaalo Kulan Ballaaran si loogu Diiwaan Galiyo Marti Fog Podcastkaaga Goobaha Kala Duwan | Martech Zone
Kuuma sheegi karo dhammaan aaladaha aan adeegsaday ama aan ku qorey waagii hore si aan ugu duubo wareysiyada Podcast meel fog - oo aan dhibaatooyin kala kulmay dhammaantood. Macno malahan sida wanaagsan ee isku xirnaanshahaygu u fiicnaa ama tayada qalabka mit arrimaha isku xirnaanta ee isdabajoogga ah iyo tayada maqalka ayaa had iyo jeer iga dhigtay inaan tuuro Podcastka
Aaladdii ugu dambaysay ee wanaagsan ee aan adeegsaday waxay ahayd Skype, laakiin qaadashada codsigu ma ahayn mid baahsan sidaa darteed martidayda had iyo jeer waxay la kulmaan caqabado soo degsiin iyo saxiixa Skype. Intaa waxaa sii dheer, waqtigaas waxay ahayd inaan isticmaalo iibsasho ku dar Skype si ay u duubto oo u dhoofiso wado kasta.
Fogee: Saaxiibka Wanaagsan ee Podcast
Saaxiibkey ayaa i weydiinayey sida aan u duubo martida fog maalin dhaweyd waxaanan u ogeysiiyey inaan isticmaalay Zoombarnaamijka softiweerka. Wuu ku qarxay markii aan u sheegay sababta… ikhtiyaarka Zoom kuu saamaxaya inaad ku dhoofiso booqde kasta sidii raadkooda maqalka. Kaliya tag Dejinta> Duubista waxaadna helaysaa ikhtiyaarka:
Markii aan duubo wareysi, waxaan had iyo jeer keydiyaa codka kumbuyuutarka maxaliga ah. Marka wareysiga la dhammeeyo, Zoom waxay u dhoofisaa codka maqalka diiwaanka deegaanka. Markaad furto galka tagayo, waxaad kaheleysaa in waddo kastaa ay kujirto fayl si wanaagsan loogu magac daray ka dibna kaqeybgale kasta oo ka mid ah raadkiisa ayaa lagu darayaa
Tani waxay ii suurta gelineysaa inaan si deg deg ah u soo dhoofiyo mid kasta oo ka mid ah raadadka maqalka ee Garageband, sameynta tifaftirka lagama maarmaanka ah si meesha looga saaro qufaca ama khaladaadka wadada aan u baahanahay, ku dar intros iyo outros, ka dibna u dhoofiyo martigaliyaheyga 'Podcast host'.
Soo Dhaweyn Video
Waxaan sidoo kale kugula talin lahaa inaad ilaaliso quudintaada fiidiyowga inta lagu gudajiro barnaamijka 'Podcast'! Markaan la hadlayo martigeyga, waxaan aaminsanahay tilmaamaha fiidiyowga ee aan iska qaadno midba midka kale inuu ku daro tan shakhsiyadda wadahadalka. Intaa waxaa sii dheer, haddii aan waligay doonayo inaan maalin uun soo daabaco raadadka fiidiyowga ee barnaamijyadayda 'Podcast', waxaan sidoo kale heli lahaa fiidiyowyada!
Waqtigaan la joogo, dayactirka qoraalkayga ayaa ah shaqo ku filan, in kastoo!
Tags: raadadka maqalkadhoofinta raadadka maqalkapodcastpodcastingwadooyin gooni ahzoomduubo zoom
BunnyStudio: Raadi Xirfad-yaqaan Codka-Dheeraad Leh oo Ku Fuli Mashruucaaga Codka Dhakhso iyo Sahlan